Egwuregwu ịchụ nta 10 kacha mma gam akporo | Gam akporosis
Aaron Rivas | | Egwuregwu gam akporo, Noticias
Storelọ Ahịa Play juputara na tọn ọtụtụ egwuregwu, ma nke akwụ ụgwọ na n'efu. Na nke a anyị nwere ike ịchọta aha nke edemede dị ka omume, ọgụ, ịgba ọsọ, egwuregwu, atụmatụ na ndị ọzọ, mana nke anyị lekwasịrị anya ugbu a bụ ịchụ nta.
Na post a anyị na-anakọta na 10 kacha mma ịchụ nta egwuregwu na i nwere ike ịhụ na Google Play Store n'ihi na ị na-egwu na gị gam akporo ekwentị. Ihe kachasị mma bụ na ndị niile anyị depụtara ugbu a bụ n'efu na n'etiti ndị kachasị ewu ewu, yana ọtụtụ nde nbudata na aha ọma dabere n'ọtụtụ echiche.
1 Deer Hunter kpochapụwo
2 Nsogbu Azụ: 3D Egwuregwu Fishing
3 Nsogbu untingchụ nta: Hchụ nta egwuregwu. Hunter simulator
4 Nnukwu unterchụ nta
5 2021 na-azụ anụ ọhịa
6 Dino Hunter: Igbu Mmadụ mben
7 Egwuregwu untingchụ nta Simulator
8 Simulator Simulator 4 × 4
9 Egwuregwu dainox na-egbu egwuregwu: egwuregwu ịchụ nta
10 Ultimate Azu Simulator
Deer Hunter kpochapụwo
"Laghachi n'oké ọhịa na ihe ndị mara mma ndịna-achụ nta ịchụ nta simulator maka gam akporo!" bụ ebum n’uche egwuregwu a, nwata ewere ya n’ile anya. Ọ bụ otu n'ime egwuregwu kachasị mma na egwuri egwu, na ihe karịrị 100 nde nbudata na Storelọ Ahịa Play kwadoro ya.
Na Deer Hunter Classic ị nwere ike ịghọ dinta ị chọrọ ịbụ nke ukwuu, na ahụmahụ miri emi nke ezi eserese na eserese dị elu. Egwuregwu ndị a e kere karịsịa maka ndị na-enwe mmasị ịgba egwuregwu na ịchụ nta simulators.
O nwere ihe karịrị 100 ụdị anụmanụ na-enweghị atụ, nke gụnyere mgbada, bea, nkịta ọhịa na ọtụtụ ndị ọzọ. E nwekwara ọnọdụ ịchụ nta dị iche iche na ihe karịrị 200 ngwa agha nwere ike ịbawanye mma site na nlegharị ọhụụ, cartridges, butts, gbọmgbọm na ngwa ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ n'efu, ọ nwere sistemụ ịkwụ ụgwọ micro maka imeju maka ịzụrụ ihe na ihe ndị ọzọ.
AKW HKWỌ AKWUNKWỌ AKW .KWỌ
Nsogbu Azụ: 3D Egwuregwu Fishing
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịchụ nta anụmanụ kama ịchụ anụ anụmanụ, egwuregwu a bụ maka gị. Nsogbu Fishing: 3D Egwuregwu Fishing Game na-eso otu isiokwu ịchụ nta dị ka Deer Hunter Classic, na enviable ndịna-emeputa. Bido ịkụta azụ nke ụdị dị iche iche na otu n'ime egwuregwu ịkụ azụ kacha adaba!
Egwuregwu a dị mma ma ọ bụrụ na ịnweghị njikọ ịntanetị n'ihi nwere ike igwu na-enweghị internet. O nwere asọmpi na egwuregwu nke ị nwere ike ịlele nka na ikike ịkụ azụ gị, ọ dabere na sistemụ larịị: ọfụma ka ị na-egwu na ụdị egwu ị ga-enweta; Malite na ị nwere ike ịnweta kapeeti, bass na catfish, na mgbe e mesịrị, site na ịbawanye mma, jide arapaimas, sharks na ọbụna nnukwu anụ mmiri!
Na Nsogbu Fishing ọ bụghị naanị na ị ga - enwe ike ịkụ azụ n'oké osimiri, kamakwa na osimiri, ọdọ mmiri na n'oké osimiri. Ọ na-egosipụtakwa oge anọ dị iche iche nke afọ, iji nye ahụmịhe egwuregwu ịme anwansị. Ihe ọzọ bụ na nwere agha royale mode na asọmpi nke enwere ndị egwuregwu 4 ruo 8 na-alụ ọgụ iji nweta ụdị ahụ bara uru kachasị akara na mpaghara ịkụ azụ.
Nsogbu ịkụ azụ: Egwuregwu ịkụ azụ
Developer: Egwuregwu Ten Square
Nsogbu untingchụ nta: Hchụ nta egwuregwu. Hunter simulator
Nsogbu Hchụ nta bụ egwuregwu ọzọ ịchụ nta na ịme anwansị, nwere ndapụta yiri nke Deer Hunter Classic. O nwere otutu ihe omuma di iche iche tinyere ugwu, oke ohia nke Kamchatka na Africa (Namibia), maka ndi safari na umu anumanu na umu anumanu dika odum na anwu.
Bụrụnụ ndị nwere nkà mgbapụ na-eso nzọ ụkwụ nke gị anụ na egwuregwu a, ọ bụ ezie na ị nwekwara ike ịhọrọ ụta dị ka ngwa ọgụ, nke dịkwa irè igbu anụmanụ na-ahụkarị nke mba dịka USA, Russia na ndị ọzọ. Nsogbu untingchụ nta na-enye ahụmịhe dị ka nke ọ bụla ọzọ, ọ bụghị maka ihe ọ bụla ka a na-ewere ya dị ka egwuregwu ọzọ dị egwu na ụdị ịchụ nta.
Nwere ike igwu ya naanị, mana ọ bụrụ na ọnọdụ a abụghị nhọrọ gị ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ịchọrọ ịgbanwe na igwu egwu na mmadụ. Enwere usoro ị nwere ike iji jiri egwuregwu ndị ọzọ tụọ onwe gị ma gosipụta ịchụ nta ịchụ nta gị. Mee ka ụbọchị ọ bụla dịkwuo mma ma bulie nkà gị ka ọ bụrụ ihe kacha mma!
Nsogbu ịchụ nta: Egwuregwu ịchụ nta
Nnukwu unterchụ nta
Imirikiti n'ime ha bụ egwuregwu ịchụ nta nke na-enye eserese ndị ezi uche dị na ha ma kọwaa ya nke ọma, nwere agba dị oke oke ma nwee ọfụma nke ọma, mana nke a abụghị ikpe na Big Hunter, ma ọ bụghị n'ụzọ ọjọọ, ọ bara uru ịkọba ama.
Egwuregwu a dị iche n'etiti igwe mmadụ maka toasting kama na-akpa ọchị katuunu na animated ndịna, na-eme ka ọ gbanahụ ihe niile nkịtị na ụdị a. Ọnọdụ nke mmegharị nke agwa na ụmụ anụmanụ ịchụ nta dị ezigbo mma, yana physics na nka gị bụ isi ihe abụọ iji jide anụ oriri gị. Anyị enweghị ike ịgafe ụda ụda ọ na-abịa, nke na-ekwe nkwa ọ funụ n'oge niile.
Nwere ike ịhọrọ n'etiti ngwá agha dị iche iche ma gbuo anụmanụ buru ibu. O nwekwara usoro okike na ndi dinta si n’uwa nile gbadoro anya na akuko nke nwere ogwugwu na-atụghị anya ya.
O nwere ihe karịrị 10 nde nbudata na ụlọ ahịa na akara ngosi 4.2 nke dabere na ihe karịrị 130 puku nyocha na ọkwa. Ọ bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, otu n'ime egwuregwu kachasị mma nke ụdị ya.
Developer: INWETA KAKAROD
2021 na-azụ anụ ọhịa
Monster Fishing bụ otu n'ime ewu ewu ịchụ nta egwuregwu kachasị ewu ewu na gam akporo na Playlọ Ahịa Google Play yana Nsogbu Fishing. E nwere ọtụtụ azụ na anụmanụ mmiri na-achọ ịchụ nta; kpọmkwem, E nwere ihe karịrị ụdị azụ 250 gburugburu ụwa!Site na mma agha ruo na whale, ihe niile maka gị ịkụ azụ na mmiri siri ike dabere na ebe azụ azụ 30 na Oke Osimiri Pasifik.
Na Azu Azụ, ị nwekwara ike wuo akwarium nke gị site na ọtụtụ ụdị azụ. Ọ na-nwere jụụ ndịna-emeputa na ịtụnanya ụda. N'aka nke ya, enwere usoro nhazi nke na-agwa gị otu ị si mee ka anụ oriri gị n'ime oke osimiri, nke na - eme ka ị meziwanye nkà gị na nke ọ bụla emere.
2022 na-azụ anụ ọhịa
Dino Hunter: Igbu Mmadụ mben
Ọ bụrụ na ihe gị abụghị ọdụm, anụ ọhịa bea, cheetahs, na enyí, obere azụ na anụmanụ mmiri, Dino Hunter: Oke Osimiri nwere ike ịbụ egwuregwu ịchụ nta ị na-achọ. Onye a na - abịakwute gị dinosaurs na anụmanụ ndị prehistoric buru ibu, yana ngwá agha dị elu nke dị ka ihe si na fim na ndị ọbịa.
You ga - ahụ dinosaurs dị oke egwu na osisi dinosaur dị ka stegosaurus ma ọ bụ egwu T. Rex na ebe tọgbọrọ n'efu, ọhịa na, karịa ihe niile, gburugburu Jurassic, nwere ọtụtụ ụdị ga-eyi gị egwu ma ị nwere ike ichu nta.
Nweta oke ọkụ na ngwa ọgụ dịka mbibi dị ka ihe rọketi na shurikens crossbow. Ga-achọ nnukwu ụlọ agha dị egwu na atụmatụ ọgbụgba egbe iji gbatuo ihe ọ bụla dinosaurs ị chịkọtara!
Dino Dinta: Igbu Oké Osimiri bụ egwuregwu ọzọ buru ibu nke nnukwu ewu ewu, yana ihe karịrị 50 nde nbudata na akara ngosi 4.4 na-akwado ya dị ka nke a.
Dino Dinta: Igbu Mmadụ mben
Egwuregwu untingchụ nta Simulator
Ọtụtụ ihe ngosi sitere na mba ndị dị ka Argentina, Belarus, Canada, Chile, Finland, France, Germany, Greece, Greenland, Italy, Kazakhstan, United States na ọtụtụ ndị ọzọ, nke ọ bụla nwere ụdị ụdị sitere na mpaghara ya, na-echere gị iji jiri obi ọjọọ tụọ onwe gị. anụmanụ ma gosipụta nkà ịchụ nta gị na ikike gị.
Nke a egwuregwu atụmatụ ọtụtụ ngwá agha sitere na site na égbè, nke enwere ike ịbanye, na egbe dị ike, ụta na obe. I nwekwara ike iji nkịta ụlọ nwere isi na-enweghị atụ iji nye ha iwu ka ha gbasoro anụ oriri gị, nke nwere ike ịbụ rabbits, elk, boar ọhịa, ele, wolves, bea, nkịta ọhịa na nnụnụ dị ka geese, roosters, nduru na grouse, n'etiti ndị ọzọ Jikwa ngwa na ngwa dị ka ọkụ ọkụ na mkpuchi dị iche iche ka ị ghara ịhụ.
Ịchụ nta simulator - egwuregwu
Developer: Ihe ntụrụndụ Woodcock
Simulator Simulator 4 × 4
Untingchụ nta Simulator 4 is 4 bụ ịme anwansị na egwuregwu ịchụ nta nke ị ga-abanye n'ime agwa ịkwọ ụgbọala 4 × 4 ụgbọala na-apụ apụ iji chọọ ihe oriri gị, nke na-agaghị adị mfe ichu nta. Nwere ụdị anụ ọhịa dịgasị iche iche na ụmụ anụmanụ na-ewe iwe site na anụ ọhịa bea, ị gaghị enwe ike gwụrụ ngwa ngwa, ma ọ dịkarịa ala ihe niile nwere ọtụtụ ọrụ enwere ike ịme.
Na ezi uche na 3D gburugburu ebe obibi na ọ na-enye ị ga-enwe ike iji ojiji nke trailers, anụmanụ afia, ọtụtụ ike ngwá agha na ọtụtụ ndị ọzọ. Enwekwara ihe ọ rụzuru na sistemụ ogo nke ga-eme gị mikpuru onwe gị, ha niile n'ọhịa na gburugburu.
Achụ nta Simulator 4x4
Developer: Egwuregwu Oppana
Egwuregwu dainox na-egbu egwuregwu: egwuregwu ịchụ nta
Ezigbo ihe ọzọ maka Dino Dinta: Igbu egbu bụ egwuregwu a, nke anyị nwekwara ike ịme ka ndị ọkachamara n'ịchụ nta iji jide dinosaurs niile na-egosi anyị.
Gburugburu 3D na eserese na-atọ ụtọ na-eme ka aha a bụrụ nke zuru ezu. O nwekwara otutu ngwá agha ịhọrọ site na, nke ọ bụla dị mma karịa nke ọzọ, na ọtụtụ ụdị nke dinosaur ndị bu ụzọ na ndị na-anwụ anwụ ịchụ nta.
Dinosaur na -achụ nta
Developer: Jikọọ Tech LTD
Ultimate Azu Simulator
N'ikpeazụ, anyị nwere egwuregwu ịchụ nta ọzọ a ma ama na Storelọ Ahịa Play. Site na ebe azu azu iri na abuo n’ime onodu eserese, obodo iri isii na obodo di iche iche, otutu ihe eji egbu azu na akuku, na otutu udiri azu, Ultimate Fishing Simulator bu otu n’ime egwuru egwu kachasi.
Ihe eserese ga - akpọga gị ebe ị na - echetụbeghị, sitere na osimiri rue ọdọ mmiri na obodo ndị a ma ama dị ka New York na Paris. Ga-enwe ike iji ụzọ dị iche iche gbuo ma melite nka gị na ịkụ azụ ọ bụla emere na asọmpi.
Developer: PlayWay Nne
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Egwuregwu ịchụ nta 10 kacha mma maka gam akporo
Ndị uwe ojii kachasị mma 13 na-achụ egwuregwu maka ekwentị mkpanaaka gị